डिभोर्स गरेको १६ महिनापछि बच्चा जन्मियो, महिलाले पूर्व पतिको हो भनेर दावी गरेपछि अदालतले दियो यस्तो अचम्मको आदेश – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/डिभोर्स गरेको १६ महिनापछि बच्चा जन्मियो, महिलाले पूर्व पतिको हो भनेर दावी गरेपछि अदालतले दियो यस्तो अचम्मको आदेश
सामान्यतया मान्छेको बच्चा नौ महिनामा जन्मिन्छ । अन्य कारण नभए अहिलेसम्म यसैलाई सत्य मानिदै आएको छ । तर एक महिलाले यो सत्यलाई चु नौ ति दिएकी छिन् । उनले पतिसँग डिभोर्स गरेको १८ महिनापछि बच्चा जन्माइन् र भनिन् यो त पूर्व पतिको हो ।
यो बिषयले विवादको रुप लिएर अदालतसम्म गयो । अदालतले भने अचम्मको आदेश दिएको छ । अदालतले बच्चको बाबु पत्ता लगाउन र महिलाले धोका दिएको नदिएको समेत पत्ता लगाउन डिएनए टेष्ट गर्न भनेको छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
भनिन्छ पति र पत्निको सम्बन्ध बिश्वासमा अडेको हुन्छ । पति र पत्निको यही नाता सदियौं देखि चलि आएको छ । त्यही बिश्वासमा आँच आए के गर्ने? भारतीय एक अदालतले भनेको छ, डिएनए टेष्ट गर्ने?
डिएनए टेष्ट गरेर पत्निले धोका दिएको नदिएको कसरी थाहा होला? यसको ब्याख्या पनि अदालतले गरेको छ । यो घटना भारतको हो । त्यहाँ इलाहावादको एक अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । इलाहाबाद उच्च अदालतले पारिवारिक विवादमा पत्नीले धोका दिएको नदिएको थाहा पाउन यस्तो महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको हो ।
दैनिक भाष्करमा छापिएको समाचार अनुसार, न्यायधीस विवेक अग्रवालले आदेशमा भनेका छन कि बच्चाको बुबा को हो भनेर प्रमाणित गर्न डि एन ए सबैभन्दा मान्य र वैज्ञानिक तरीका हो । यस बाहेक, डिएनए परीक्षणले पत्नीले पतिलाई धोका दिएको नदिएको पनि प्रमाणित गर्न सक्छ ।
अदालतको यो आदेश राम आसरेको याचिकाको सुनुवाईमा आएको हो । युपीको हमीरपुरमा बस्ने दम्पतीलाई परिवार अदालतबाट डिभोर्स गरिएको थियो । श्रीमानका अनुसार उनी २०१३ जनवरीदेखि आफ्नी श्रीमतीसँग बस्दै आएका थिएनन् । जून २०१४ मा दुबै डिभोर्स भएको थियो ।
श्रीमती आफ्नो माइती घरमा बस्छिन् । जनवरी २०१६ मा उनले एउटा बच्चालाई जन्म दिइन् । पत्नीले भनिन् कि बच्चा पूर्व पतिको हो । उच्च अदालतले भन्यो कि डिएनए टेष्ट गराएर पत्निले धोका दिएको नदिएको पत्ता लगाउ । सांकेतिक तस्वीर